March 2015 - Page 2 of 49 - iftineducation.com
Muuqaal Midka Ugu Cajiibsan Ha Daawan Hadaa Kacsi Dhawdahay
iftineducation.com – Muuqaal Midka Ugu Cajiibsan Ha Daawan Hadaa Kacsi Dhawdahay muuqaalkaan oo ku tusinaayo sida ay nooga fiican yihiin ragga cadaanka marka loo fiiriyo xaaskooda sey u qadarinaayaan romantikna ugu yihiin. gabdhaha qaar hadey muuqaalkaan daawadaa waan hubaa maba guursan doonaa wiilasha soomaalida RIIX HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
Daawo Gabar Soomaali ah oo Sixun u Garaaceyso Gabar Cadaan ah
iftineducation.com – Daawo Gabar Soomaali ah oo Sixun u Garaaceyso Gabar Cadaan ah halkaan waxaan idiin kugu soo gudbineynaa gabar soomaali iyo gabar cadaan ah oo is rifaayo timaha. marki danbo ayaa gabadha cadaanka ah si xul loo garaacaa wax kala celinaayana malaha kaaga daran dadka waa u saxbinaayaan kamira ayeyna ka duubanayaan hoos ka daawo muuqaalka riix halkaan daawasho wacan
Ingiriiska oo ka hortagaya ineey midoobaan Alshabaab & Daacish
iftineducation.com – Siihayaha xilka Danjiraha UK u fadhiya Soomaaliya Neil Wigan, ayaa sheegay in UK ay dadaal xoogan ku bixineyso, sidii ay uga hortagi lahayd midow dhexmara kooxda Alshabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta iyo Doowlada Islaamiga ee Daacish. Danjire Neil Wigan, ayaa sheegay in isku biirista Alshabaab iyo Daacish, ay abuuri karto qatar xoogan oo dhinaca amaanka ah, waxaana uu xusay…
Iiraan oo Xaruumo Mad-habta Shiicada lagu barto ka furtay Muqdisho-XOG
iftineducation.com – Baaritaan mudo socday ayaa warfaafiye.com, waxa uu ogaaday in doowlada Iiraan ay magaalada Muqdisho ka furtay dhowr xaruumo oo lagu faafiyo Mad-habka Shiicada. Xaruumahaan ayaa isugu jira Masaajidyo iyo Maraakis, waxaana maalin walba imaada dhalinyaro iyo Haween, kuwaasoo si tartiib tartiib ah loogu baro Mad-habka Shiicada. Xaruunta ugu weyn waa Masaajid ku yaal wadada Maka Al-mukarama, gaar ahaan meel…
Kenya oo qabatay Gabdho doonayay ineey Al-shabaab ku biiraan
iftineducation.com – Ciidamada Booliska Mombasa, ayaa qabtay 3 Gabdhood oo lala xiriirinayo falal argagixiso ineey qaraxyo is miidaamin ah geystaan. Gabdhahaan ayaa markii la qabanayay waxay saarnaayeen Gaari kusii jeeday magaalada Mandheera, iyagoo doonayay ineey ugu sii gudbaan dhinaca Soomaaliya si ay Al-shabaab ugu biiraan. Gudoomiyaha Mombasa Nelson Marwa, ayaa sheegay in sadexdaan Gabdhood lagu qabtay deegaan Ceel-waaq oo ah xuduudka…
Arsenal Oo Liverpool Ula Tageysa Qarash Iyo Walcott Si Raheem Sterling Uga Helaan
iftineducation.com – Ilo wareedyo ay qorayaan saxaafadda Ingiriiska ayaa sheegaya in Arsenal ay si dhab ah ugu dhaqaaqayaan saxiixa Raheem Sterling si xilli ciyaareedka dambe ugu xoojistaan qadka weerarka Laacibkaan ay u waalanayaan kooxo kala duwan ayaa weli ka meer meeraya in hishiis cusub siiyo Liverpool oo tuugmo ugu jirta . Daily Mirror ayaa sheegeysa in Arsenal haatan diyaar la yihiin…
Daawo : Akdeemiyaddii Ugu Horeysay Kubadda Cagta Ah Oo Muqdisho Laga Furay
iftineducation.com – Kubada cagta Somalya ayaa sameyneysa hor mar cusub waxaana magaalada Muqdishu laga furay academy-yadii ugu horeysay oo kubadda cagta ah . Laba sano gudahood , kubadda cagta Somaliya ayaa gaartay heer sareeya waxaana dib u furmay horyaalka Somaliya . Academy-daan ayaa waxaa fursad ka helaya dhalinyaro ay da`dooda kala duwan tahay waxaana macalimiin ka ah tababarayaal u dhashay dalka…
Theo Walcott ” Ilaa Daqiiqadda Ugu Danbeysa Waxaan U Dagaalamayaa Booskeyga Joogtadda Ah Ee Xulka Ingriiska”.
iftineducation.com – Theo Walcott garab werarka kooxda Arsenal iyo weliba sidoo kale xulka qaranka dalka ingriiska ayaa sheegey in uu diyaar u yahay u dagaalanka booskiisa joogtadda ah. Xiddigan ayaa waxaa uu dhaawac garoomadda uga maqnaa mudo ku siman 9 bilood, waxaana uu haatan ka soo kabtey dhaawacaas. ” Run ahaantii waxaan u diyaar ahay waa tartan in aan u galaa…
iftineducation.com – Cilmibaarayaal u dhashay dalka Kanada ayaa daraasad ay sameeyeen ku ogaaday in sonkortu ay xiriidh adag la leedahay xanuunada la socda gabawga iyo sababaha duqnimada keena. Cilmi-baarayaashan reer Canada waxa ay ogaadeen in sonkortu gaar ahaan marka la eego sida ay ula fal gasho unugyada kala duwan ee qofka ay sabab weyn u noqon karto cimri degdeg iyo astaamaha…
Fanaan shaxaari ah oo soo qaaday hees cabdigood u baahan Daawo muuqaal fisqi dhaafay
iftineducation.com – xidiga ugu da’da yar fanaaniinta soomaalida South Africa Daauud Daacad ayaa soo saaray Heetii lawada sugayay ee waris fanaanka ayaa muuqaalka heesta waxa uu ku soodaray waxyaabo ka reeban dhaqanka suuban ee soomaalida heesta waris waxaa hal Abuuray oo weliba laxankana ku laray Abwaan Caato muusilkii ceenbaceen dhanka kaamirada waa CK. Guji halkaan ee daawo